The Cofrentes nuklia ike osisi: àgwà na ọrụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Anyị gara n’obodo Cofrentes, nke dị na Valencia, ịga leta ụlọ ọrụ nuklia na-enye Spain ikike. Lọ ọrụ ike Cofrentes nke nuklia Ọ bụ ụlọ ọrụ Iberdrola Generación Nuclear SA nwe 100% ya. plantlọ ọrụ nuklia a nwere ọtụtụ ihe mere nke mere ka ọ bụrụ ndị ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na ndị na-emebi ikike nuklia. Njikwa nke osisi ahụ na-achịkwa ụkpụrụ na nkwa nke ndị isi oche nke Iberdrola kwadoro.
Na nke a, anyị ga-enyocha njirimara niile nke ụlọ ọrụ nuklia nuklia. Anyị ga-amalite site na ịkọwapụta otu o si arụ ọrụ na ike ole ọ na-enye na ntanetị ọkụ Spanish. N'ikpeazụ, anyị ga-ekwu maka ihe ndị kachasị mkpa ị merela. You chọrọ ịmata na omimi Cofrentes nuklia ike osisi? Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ike ike Cofrentes
3 Ọrụ nke osisi Cofrentes nke ike nuklia
3.1 Mmanụ eji
3.2 Nzọụkwụ iji nweta ume
4 Ihe omume osisi ike nuklia
Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ike ike Cofrentes
Ulo oru ulo oru na atumatu ebumnuche ya na-acho otutu ebumnuche, nke bu:
Debe ụlọ ọrụ nuklia na ọnọdụ zuru oke.
Nọgide na-enwe ezigbo nchekwa ma melite teknụzụ ka ọ na-arụ ọrụ oge niile.
Zụọ ndị ọrụ n'ihe ize ndụ dị na ọrụ iji zere ihe ọghọm enwere ike.
Mepụta atumatu na-enyere ndị ọrụ aka nwere ahụmịhe nke ha na ndị na-abụghị isi ụlọ ọrụ.
Gwa ndị mgbasa ozi na eziokwu na ụzọ emeghe banyere ọnọdụ nke osisi ugbu a. N'ụzọ dị otú a, a pụrụ ịmepụta echiche ọha na eze ma mee ka ndị otu nwere mmasị mara.
The Cofrentes nuklia ike osisi nwere ike eletrik nke 1.092MW. Nke a mere ka ọ bụrụ otu n'ime ndị kasị ibu na mmepụta na niile nke Spain. Ọ kwadebere n'ụzọ na a BWR ụdị esi mmiri chernobyl. Ọ bụ igwe nrụpụta mmiri. Nke a pụtara na ọ bụ naanị otu mmiri dị mkpa ma ọ bụ mmiri jụrụ oyi nke na-ahụ maka ịgbanye na chernobyl.
Ọ dịkwa naanị etiti nke ahụ bụ nke ndị a kpọrọ ọgbọ nke abụọ. Ndị ọzọ nke osisi na-eji a pressurized mmiri usoro, mgbe a na-esi.
Ọrụ nke osisi Cofrentes nke ike nuklia
Anyị ga-ekewaa nkọwa banyere ọrụ nke ụlọ ọrụ ike nuklia n'ime akụkụ. N'akụkụ nke ọ bụla, a ghaghị iburu n'uche na e nwere usoro dị nro.
Iji nweta ume, usoro a chọrọ usoro iji ọkụ ọkụ ọkụ. Usoro a nke na-arụ ọrụ maka ịmịpụta uzuoku abụghị naanị ihe nrụpụta nuklia. A na-etinye ya n'etiti ihe inyeaka na njikwa ihe n'ime arịa nrụgide. Nke a bụ ebe a na-emepụta ya ikuku nuklia nke amuru uranium. Usoro a na-amalite ịnye ọkụ na-ekpo ọkụ karị ruo mgbe mmiri ahụ kupụrụ.
Maka mmeghachi omume a mmanụ a maara dị ka 4,2% uranium juputara na ntaneti. Ọ bụ ihe seramiiki nke nwere ike iguzogide oke okpomọkụ na oke ọgwụ. Anyị na-echeta na radieshon dị oke egwu nye ụmụ mmadụ yana na obere ịta ahụhụ ọ nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ. Ihe a nwere seramiiki dị na oghere zircaloy-2 (zirconium alloy) nke a na-ahazi n'ime usoro 11 × 11. Nke a bụ ihe na-eme ka akpụ ihe dị mfe njikwa.
Nzọụkwụ iji nweta ume
Nzọụkwụ ndị a na-agbaso iji nweta ume bụ ndị a.
Ihe mbụ bụ bulie ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri n'ime igwe ahụ. Mmiri ahụ na-aga n'ụzọ dị elu site na isi. A na-eme ka mkpanaka zircaloy ahụ dị ọkụ site na ikuku nke uranium atom ma kwe ka mmepụta nke ihe dịka 1,6 Tm kwa nke abụọ nke uzuoku zuru oke. Alụlụ ahụ na-ekewapụ site na mmiri mmiri ma kpoo na akụkụ nke elu nke chernobyl arịa. Ọ na - aga n'ihu ịgbasa na turbine nrụgide dị elu.
Steam ahụ gbasaa akpọnwụ ma mee ka ọ dị ọkụ ọzọ na igwe ọkụ abụọ na igwe mmiri.
Igwe anwuru na akpo nke uzu oku nabatara ya site na aru ike abuo nke turbine ebe mmeba ya kwusi ruo nrụgide nke 75mm kọlụm Mercury zuru oke. N'ikpeazụ, a na-ezigara ya na condenser nrụgide abụọ ebe a na-agbanwe ya ka ọ laghachi mmiri iji weghachi ya na igwe ntanetị site na usoro mgbake ọhụụ.
Igwe ọrụ nke turbine nwere ka a gbanwee ka ọ bụrụ ike eletrik n'ụzọ yiri nke etu esi arụ ya na ụlọ ọrụ ike ọkụ. A na-eji ike ole a na-emepụta ma bufee ya na ndị isi na-agbanwe ọkụ.
A na-eme ka jụrụ ihe ọkụkụ nke osisi ahụ na sekit mechiri emechi site na ụlọ elu abụọ na-emepụta ihe. Lọ elu ahụ nwere akụkụ nke 129 mita elu na 90 mita na isi dayameta. N'ime ụlọ elu ndị a ebe mmiri na-erute site na ọkpọkọ mechiri emechi ma mee ka ọ dị mma site na ịgwakọta ya na ikuku na-arị elu. Ike larịị nke chernobyl na-achịkwa site recirculation nfuli na akara mkpara na banye n'ime isi na ala.
Ihe omume osisi ike nuklia
N'ime afọ 2017 E debanyere aha 10 nke mere ka osisi ahụ mechie. Nke kachasị njọ bụ ọdịda nke furu ya na Disemba nhazi ọkwa nke ọkwa 1 ("anomaly") na International Scale of Nuclear and Radiological Events (INES) nke Kọmitii Nchedo Nuklia (CSN).
Turbines na biarin emezughị na ụlọ ọrụ nuklia ga-akwụsị ọtụtụ oge. Ma ọ bụ na nuklia nuklia nke ọ na-arụ ọrụ, General electric, bụ otu ihe nlereanya ahụ dị ka rugị Fukushima. O nwere otu ihe njiri mara ya. N'iburu ọdịda na-aga n'ihu mgbe afọ 35 gachara ọrụ (ọ ga-enwe ndụ bara uru nke ihe dị ka afọ 40) Iberdrola na-ezube ịnọgide na-eme ka ọ rụọ ọrụ.
Ndị na-agbachitere gburugburu ebe obibi na-eti mkpu maka mmechi nke ụlọ ọrụ nuklia iji zere ọdachi ndị dịka Chernobyl ma ọ bụ Fukushima.
A naghị akọwa ihe n'ụzọ ziri ezi na ihe ndị dara ada bụ isi nke ọrụ nke ahịhịa.
Ka anyị nwee olile anya na ụlọ ọrụ ike nuklia nke Cofrentes anaghị ebute nnukwu nsogbu ma ha na-eme ihe ọfụma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike ike » Ike nuklia » Cofrentes ike nuklia